News 18 Nepal || विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष दशैं तिहार किन ढिलो ?
काठमाडौं । यसवर्ष दशैं र तिहारजस्ता पर्वहरु विगतका वर्षमा भन्दा झण्डै एक महिना ढिलो आउँदैछन् । आखिर किन यस्तो भयो होला ? यो जिज्ञासा नेपाली पर्वबारे सरोकार राख्ने जोकोहीमा हुन सक्छ । अरू बेला प्रायः असोज महिनामै सकिने दशैं यस वर्ष कात्तिक १ गते सुरु भएर कात्तिकको मध्यमा सकिन्छ ।
यस वर्षको घटस्थापना कात्तिक १ गते परेको छ भने फूलपाती कात्तिक ७ गते र विजयादशमी कात्तिक १० गते परेको छ । यस वर्ष तिहारको भाइटीका मंसिर २ गते पर्छ । अरू वर्ष प्रायः कात्तिकको मध्यतिरै सकिने छठ यस वर्ष मंसिरको पहिलो साता मात्र सकिन्छ ।
गत वर्ष फूलपाती असोज १८ गते परेको थियो भने विजयादशमी असोज २१ मै सकिएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष भाइटीका कात्तिक १२ गते नै सकिएको थियो भने यस वर्ष मंसिर २ मा परेको छ । गत वर्ष छठ कात्तिक १६ गते नै सकिएको थियो । यस वर्ष मंसिर ६ गते छठ मनाउनु पर्ने भएको छ ।
झण्डै ३ वर्षमा एकपटक आउने अधिकमास यस वर्ष असोज २ गतेदेखि सुरु भएको छ । नित्य कर्मबाहेक अरू कुनै पनि धार्मिक कर्मका लागि अशुभ मानिने यो महिनालाई मलमास या पुरुषोत्तम महिनाको नामबाट चिन्ने गरिन्छ । यही मलमास या पुरुषोत्तम महिनाका कारण सोह्र श्राद्धपछिका सबै पर्वहरू एक महिना पछाडि सरेका हुन् ।
आज नवरात्रको सातौँ दिन, कालरात्री देवीको पूजा गरिँदै
शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदै, यसरी गर्दा हुनेछ फलिफाप
द्वापर युगमा गरिएका यी भविष्यवाणी हुँदैछ सत्य सावित !
आज बडादशैँको पाचौँ दिन, स्कन्दमाताको विशेष पूजा
हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा